» “कुखुरा बोक्ने ट्रकमा चढेर काठमाडौं आएँ”
“कुखुरा बोक्ने ट्रकमा चढेर काठमाडौं आएँ”
२७ असार २०७६, शुक्रबार २२:३५ प्रकाशित
डेढ दशक अघिको बीचमा वुटवलमा एकरात एउटा ट्रकमा कुखुराहरू लोड भए । ती कुखुराहरू काठमाडौँको लागि रवाना हुने तर्खरमा थिए । नजिकै पन्तको घरमा एउटा झोला तयार थियो । त्यो झोलाभित्र राजधानीको लागि भनेर घरबाट कोचिएका सपनाहरू थिए । त्यही झोलालाई सुरक्षा दिन भनेर छेवैमा उभिएकी थिइन् सुरक्षा पन्त । रातभर उनका आँखाले सपनाहरू बेचे र हृदयले किने । आँखा रहृदयबीचको सौदाबाजी हुँदाहुँदै उनलाई काठमाडौँले स्वागत गर्यो । र, काठमाडौँले सुरक्षाको मनको कुनामा भन्यो- केही बन्नुपर्छ । राजधानी ओर्लिएकै दिन उनी होस्टल पुगिन् | घरबाट कोचिदिएका सपनाहरूलाई थाक लगाएर मिलाइन् ।
गाउँमा हुँदा उनी चुलो र चौकामा मात्र सीमित भइनन् । विद्यालयले तोकेको समय पछाडि फुटबल, क्रिकेटजस्ता बाहिरी खेलमा भिज्ने उनको बानी थियो । समाजले केटाको खेल भनेर पारित गरे तापनि उनले समाजले बनाएको विदेयकलाई रोक्का गरिन् ।
बाल्यकाल सबैको लागि सपनाको स्रोत हो । बाल्यकालमा यस्ता सपनाहरू देखिन्छन् जुन सपनाहरूलाई कतिले कालान्तरमा हृदयको चिहानमा कङ्कालको रूपमा भेट्छन् त कतिले उचाइको बिन्दुमा सपनासँगै बाँचेको महसुस गर्दछन् । तर सुरक्षाले बाल्यकालमा कुनै सपनाको खेती गरिनन् । उनी भन्छिन्, ‘मेरा सपनाहरू दिनहुँ फेरिने भएकाले मलाई सपना देख्न नै डर लाग्थ्यो ।’ तरपनि दिमागमा घुमिरहने सपनाहरूमध्ये उनले धेरै देख्ने भनेको पाइलट , एयरनोटिक इन्जिनियर वा पुलिस थियो । तर वर्तमानमा उनी यी मध्ये केही बनिनन् । उनी जे बनिन् सपनामध्येको फरक बनिन् ।
बुटवलबाट अबोध दिमाग बोकेर आएकी सुरक्षालाई काठमाडौँले भन्दापनि काठमाडौँभित्र रहेको होस्टलले जीवनको गहिराइ नाप्न सिकायो । होस्टल बस्दाताका भेटिएका ती अन्य अनुहारहरूले उनलाई जीवनमा कयौँ मान्छेसँग भेट गरायो | उनीहरूले केही सिकाउँछन् भन्ने कुराको स्पष्ट ज्ञानसमेत दियो । अनेक अनुहारसँग भेट्ने क्रममा सुरक्षाले विचार कसरी मिल्नसक्छ ? विचार कसरी नमिल्ने मोडमा पुग्न सक्छ भन्ने कुराको ज्ञान प्राप्त गरिन् । जीवनमा धेरै कुरा पाउन बाँकी छ भन्ने कुराको बोध सुरक्षालाई होस्टल बसाइले नै सिकाएको हो भन्ने उनको मान्यता रहेको छ । बाआमाबाट टाढा भएपछि बाआमाको याद भनेको नदी झैँ आउँछ; निरन्तर । बाआमासँगै हुँदा उहाँहरूको महत्व खहरेखोला झैँ महसुस हुन्छ; कहिलेकाहीँ । तर, सुरक्षालाई यादले त्यति पिरोलेन रे | किनकि बच्चाबाटै बाआमासँग जसरी अरू बच्चा झ्याम्मिन्छन् त्यसरीनै बाआमासँग झ्याम्मेको सम्झना उनलाई कमैमात्र छ ।
साइन्समा उच्च शिक्षाको अध्ययन हाँसिल गरेपछि सुरक्षालाई भविष्यको बाटो तिरमिर तिरमिर झैँ देखियो । केही त बन्नु छ तर के बन्ने ? यो उनको हृदयले प्रत्येक सासको प्रक्रियामा दिमागलाई सोधेको प्रश्न थियो । पूर्वीय समाजमा अभिभावकले नै छोराछोरीको भविष्य निर्धारण गर्ने अघोषित परम्परा छ, दशकौँदेखि | यो सबैलाई थाहा छ । सुरक्षाले बाआमालाई एयरनोटिकको प्रस्ताव पेश गरिन् । घरबाट सोच परिर्वतनको आदेश आयो । डाक्टर बन्ने इच्छालाई पनि उनले हरि ॐ गरिन् । अन्तत: तमाम बाआमाले बुझेको विषय इन्जिनियरिङलाई उनले जिन्दगीको रेसमा आफूसँगै लिएर दौडीइन् । उनी भन्छिन् – ‘इन्जिनियरिङ पनि मेरो दिमागले मात्र पढ् भनेको थियो, हृदयले तेरो क्षेत्र अरूतिर नै छ भनिरहेकै थियो ।’ उनलाई समयले उल्टै प्रश्न गरिरहेको थियो – ‘तँ यो बन्दिनस् त के बन्छेस् ?’ उत्तर सुरक्षा स्वयमलाई पनि थाहा थिएन ।
मान्छेलाई समयले केही बनाउँछ भने जिन्दगीको सुरुवाती दिनबाटै केही न केही झिल्को दिइरहन्छ । सुरक्षालाई पछि थाहा भयो, बाल्यकालमा म किन नाच्न चाहेँ, किन नाटक खेल्न मन पराएँ भन्ने कुरा । सुरक्षा विगत सम्झने क्रममा भन्छिन् , ‘थर्ड इयरको एक्जाम चलिरहेको थियो । एकरात फोन आयो । आवाज चिनिएन तर आवाजले नाम भनेपछि म आश्चर्यमा परें |’ त्यही नाम निर्देशक आलोक नेम्बाङ्गको थियो ।
उनलाई उनका विगतका टेलिभिजनमा देखिएको उपस्थितिले आलोकको फोनले सम्झिएको थियो | आलोकले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा धेरै ठूलो योगदान दिएका छन् । उनले कसैप्रति सम्भावना देख्नु नै ठूलो कुरा थियो । त्यो सम्भावना उनले सुरक्षामा देखे । परीक्षाले घाँटी समाएको कुरालाई सम्झिदै सुरक्षाले आलोकलाई फोन गरेको भोलिपल्ट भेट्ने बाचा गरिन् र भोलिपल्टको परीक्षा सकिएलगत्तै आलोकलाई भेट्न पुगिन् । आलोकले एउटा म्युजिक भिडियोको अफर गरे । इन्जिनियरिङ दिमागमा थियो र कलाकारिता हृदयमा | परीक्षामा सोधिने टिक द बेस्ट एन्सरझैँ उनले कलाकारितामा टिक लगाइन । तर, केही समयपछि । कलाकारले पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाएकी सुरक्षालाई पहिले पढाइको बाटो सक्ने हतास थियो । र, लगत्तै कलाकारितामा छिर्ने अर्को चटारो । यही बीचको भागदौडमा उनले कलाकारितालाई अँगालेको कथा उनको सम्झनाको कुनै एक बिन्दुमा मौन भएर बसेको छ ।
आलोकले सुरक्षालाई जीवनको एक बिन्दु देखाएका थिए । सुरक्षा उनै आलोकलाई जीवनमा कहिल्यै बिर्सन नसक्ने एक अभिभावकको रूपमा मान्छिन् । एभरेष्टटकबाट